အဆိုပါ Cob အပေါ်အိုးပြောင်းဖူး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မှို၏မုန့်နှင့်အတူ Salisbury ကင်
အဆိုပါ Cob အပေါ်အိုးပြောင်းဖူး
Crock Pot ပြောင်းသည် Cob ရှိနွေရာသီစားပွဲဖြစ်သည်။ သင်၏အစားအစာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ cob အပေါ်ပြောင်းဖူး၏လတ်ဆတ်တဲ့အရသာကြာနှင့်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံအားဖြင့်အလွယ်တကူလုပ်! မိနစ်အနည်းငယ်သာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များချစ်ကြမည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
နွေရာသီတစ်နှစ်ရဲ့စိတ်ကူးရသောအချိန်ပါ! ဤမျှလောက်များစွာသောပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများ, သူငယ်ချင်းများနှင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူစုရုံးဖို့အခွင့်အလမ်းများနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအနှံအများကြီးရှိပါတယ်! ငါပြင်ဆင်သောချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်အချိန်ကာလ၌လတ်ဆတ်သောအစားအစာအားလုံးကိုအသုံးပြုလိုသည်။ အမှန်မှာမီးဖိုချောင်ထက်အိမ်ပြင်တွင်နေခြင်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သည်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိသည်အတိုင်း, ဒီငါမယုံနိုင်စရာတစ်ခုခုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါငါမှဖွင့်သောသူတို့အားချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါ prep ဖို့အချိန်အများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အကြှနျုပျ၏ crock အိုးတစ်နေ့ကယ်တင်ခြင်းနှင့် cob အပေါ်ပြောင်းဖူးဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ဤလတ်ဆတ်တဲ့ချက်ပြုတ်၏အလုပ်အားလုံးလုပ်! ငါပွက်ပွက်ဆူနေသောအိုးစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ကညှစ်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ဤပြောင်းဖူးသည်သင်ဖြစ်သည့်အခါနူးညံ့သော၊
ဒီပြောင်းဖူးကိုစပါးကျီထဲထည့်ပြီးကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးခူးဆွတ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနားမှချက်ချင်းတူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာ crock အိုးထဲမှာ cob ပေါ်မှာပြောင်းဖူးကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်၊ ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းဖူးကိုသွားဖို့နည်းလမ်းအမှန်ပါပဲ။
* ဆားငန် * အပိုဗာဂျင်းသံလွင်ဆီ * Crock-Pot
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၃ နာရီ ၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly NilssonCrock Pot ပြောင်းသည် Cob ရှိနွေရာသီစားပွဲဖြစ်သည်။ သင်၏အစားအစာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ cob အပေါ်ပြောင်းဖူး၏လတ်ဆတ်တဲ့အရသာကြာနှင့်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံအားဖြင့်အလွယ်တကူလုပ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၆-၈ နားရွက် အဆိုပါ cob အပေါ်ပြောင်းဖူး
cook ⅔ခွက်ရေကိုနှေးသောမီးဖို၏အောက်ခြေတွင်ထည့်ပါ။ ပြောင်းဖူးနှင့်အဖုံးတွင်ထည့်ပါ။
မြင့်မားသော 3-4 နာရီချက်ပြုတ်။ ပြောင်းဖူးသည်အ ၀ ါရောင်နှင့်ပူပြင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်အားလုံးကြိုက်သလောက်အရသာရှိရန်ထောပတ်ကိုနှိုးဆော်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးအဆိုပါ cob အပေါ်ပြောင်းဖူး သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ကျွန်ုပ်၏ပြောင်းဖူးပေါ်တွင်ရိုးရာထောပတ်၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်း၎င်းအားမတူညီသောအရသာပေါင်းစပ်မှုဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သင်၏ပြောင်းဖူးကိုစပါးရိတ်ရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကိုသင်ရှာဖွေနေလျှင်၊ အဆိုပါ Yummy ဘဝမှာ Monica ကျော် အချို့ကြောက်မက်ဘွယ်ရာသီစိတ်ကူးများရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် cob တွင်ကင်ပြောင်းဖူးကိုပိုနှစ်သက်ပါကအက်ရှလေကိုသွားလည်ရန်သင်သွားလိုပါသည် စင်တာဖြတ်ကွတ် သူမ၏နည်းလမ်းသက်သေပြပျက်ကွက်သောကြောင့်!
ငရုတ်သီးသီး Cheddar Cornbread